Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo ka socda Beled Xaawo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo ka socda Beled Xaawo
January 25, 2021 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidanka Jubbaland. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa ka socda magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, sida ay sheegeen ilo-wareedyo deegaanka jooga.
Dagaalka oo ah mid xoogan ayaa bilowday xalay xilli dambe isagoo ilaa saakay ka socda halkaas.
Waxaa jira khasaare ka dhashay dagaalkaas, balse tirada saxda ah weli lama oga, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
War-saxaafadeed maanta oo Isniin ah kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maleeshiyo ay soo hubeysay Kenya ay weerar ku soo qaadeen gobolka Gedo.
Labada dhinacba waxay guul ka sheegteen dagaalkaas balse dad ku sugan magaalada ayaa sheegaya in dagaalku uu weli socdo dadka qaarkiisna ay bilaabeen in ay qaxaan.
Dagaalka ayaa imaanaya iyadoo uu jiro khilaaf arrinta Gedo ay kamidtahay oo ka taagan doorashada soo socota ee Soomaaliya. a
May 11, 2019 Ugu yaraan sideed qof oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso
Garoowe-(Puntland Mirror) Asbuucyadii u dambeeyay waxaa sii kordhaysay xiisad colaadeed oo ka jirta gobolka Sanaag oo u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland. Xiisada ayaa soo ifbaxday kadib markii horaantii bishaan ay deegaano gobolkaas kuyaala yimaadeen ciidamo [...]
Heavy fighting erupts in Galkayo town of Mudug region
Galkayo-(Puntland Mirror) Heavy fighting erupted in Galkayo town of Mudug region on Thursday morning between Puntland and Galmudug forces, residents said. A resident in Galkayo who asked not to be named, told Puntland Mirror on [...]